DHAGEYSO:Musharaxa maayarka Hargaysa oo beeniyay inuu mudaharaad abaabulayo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Musharaxa maayarka Hargaysa oo beeniyay inuu mudaharaad abaabulayo
DHAGEYSO:Musharaxa maayarka Hargaysa oo beeniyay inuu mudaharaad abaabulayo
Cabdikariim Axmed Mooge oo ka mid ah Xubnaha Golaha deegaanka Degmada Hargaysa ee dhawaan la Doortay sidoo kalena u taagan qabashada Xilka Maayarka Caasimada Soomaaliland ee Hargaysa ayaa wuxuu ka hadlay wararka sheegaya inuu wado abaabul Banaanbax isaga iyo Taageerayaashiisu ay ku qabanayaan Magaalada Hargaysa .
C/kariim Axmed Mooge ayaa Beeniyay inuu Jiro Banaanbax ay u qorsheeyeen inuu Hargayso ka dhaco wuxuuna sheegay inuusan wali ka tanaasulin hankiisii ahaa inuu Hogaamiyo Magaalada Hargaysa ee Caasimada Soomaaliland.
Dhanka kale Cabdikariim Axmed Mooge ayaa Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ugu baaqay inuu qadariyo Doonista Shacabka ku nool Magaalada hargaysa.
Previous articleMilatariga Soomaaliya iyo AL-shabab oo isku fara saaray gobolka Baay
Next articleCiidanka Xoogga Soomaaliya oo Howlgalo ka Fuliyo Gobolka hiiraan
DHAGEYSO:Dadka la nool cudurka AIDS-ka ee Garissa oo ka cabanaya faquuq
DHAGEYSO:Xoghayaha Kuppet ee Vihiga oo ka hor yimid xeerka cusub uu soo saaray guddiga TSC
Waxaa sare u kacay dadka la nool cudurka HIV/AIDs-ka ee ismaamulka Garissa. Boqolkiiba 60 ayuu ku kordhismay heerka xanuunka AIDs-ka ee dowlad deegaankaasi Dadka la nool...
Xoghayaha ururka macalliminta Kuppet laanta ismaamulka Vihiga Sabala Inyeni ayaa sheegay inay khalad tahay qorshaha guddiga adeegga macalliminta ee TSC ee ah in barayaasha...